यी नेताको देशभक्ति देखिएको दिन
भारतको सेना कति छ थाहा छैन, तर नेपाली सेना झण्डै ३ करोड छ ।
यहाँ कर एक नेपाली गोर्खालीको सन्तान हो । हामी एकजुट हुँदा गर्न नसक्ने केही पनि छैन यहाँ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भूमि नेपालको हो । नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारले पहल गरोस्, हामो समर्थन सदैव हुनेछ ।
– राजेन्द्र महतो
काठमाडौं । २०७७ जेठ ३१ को दिन यसकारण पनि ऐतिहासिक रह्यो कि मधेशवादी दलका नेताहरुले पहिलोपल्ट भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि नेपालको हो भने, हामी पनि नेपाली हौं भने, नेपालको राष्ट्रियताप्रति ऐक्यवद्धता जनाए । अव मधेश अलग देशको नारा सकियो ।
राष्ट्रवादी को हो ? मधेसी नागरिकले राष्ट्रियताको सवालमा कति पटक अग्निपरीक्ष दिनुपर्ने हो ? राष्ट्रियता जाति, धर्म विशेष र क्षेत्रले निर्धारण नहुने उल्लेख गर्दै नेता राष्ट्रघात र राष्ट्रवादको परिभाषा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएर आफूहरुमाथि शंकाको दृष्टिले नहेर्न आग्रह गरे । प्रत्येक मधेसी जनताले सेना भएर नेपाली सीमाको रक्षा गरेको बताए ।
अब फेरि यो देशमा राष्ट्रघात हुने हो कि ? यो राष्टघाती को–को हो यो देशमा पहिचान गर्नुप¥यो । देश बेचुवाहरु को–को हो ? देश बेचुवाहरुको खोजी हुनुप¥यो । नेपाली जनताले त्यो पनि खोजिरहेको छ । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा त थियो ५८ वर्ष पहिले कुन देशबेचुवाले बेच्यो ? स्वेतपत्र खै जारी गरेको ? स्वेतपत्र जारी गर्नुपर्दैन ? देश बेचुवा र राष्ट्रघातीलाई टुँडीखेलमा झुण्ड्याउनु पर्दैन ? यस्तो प्रश्न पनि उठाए ।
जनताको भावना, देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएको सवाल भएकाले संविधानप्रति असन्तुष्टि भए पनि आफूहरुले संशोधन विधेयकमा पूर्ण समर्थन गरेको बताएका उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतोहरुको प्रशंसा भइरहेको छ । अव उनीहरुले यो उचाइबाट नझरुन्, विश्लेषकहरुले सुझाव दिइरहेछन् ।